शनिबारको दिन झुक्किएर पनि नखानुहोस् यस्ता चिज, नत्र रिसाउनेछन् शनिदेव ! - Alert Khabar
Homeमनोरञ्जनशनिबारको दिन झुक्किएर पनि नखानुहोस् यस्ता चिज, नत्र रिसाउनेछन् शनिदेव !
२. खाद्य वस्तुको कुरा गर्नुपर्दा तपाईंले शनिबारको दिन मसुरोको दाल नखानु होला । मसुरोको दालबाहेक अन्य दाल भने खान सक्नु हुनेछ । मसुरोको रङ्ग रातो हुने भएकाले यो मंगलसँग सम्बन्धित भएकाले शनिबारको दिन मसुरोको दाल खाए शनिमा क्रु’र दृष्टि बढाउँछ ।